katy - Synonyms of katy | Antonyms of katy | Definition of katy | Example of katy | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for katy
Top 30 analogous words or synonyms for katy
ဘရူနို မား(စ်) ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း No.1 Single အများဆုံးရရှိထားသော Artist များထဲတွင် Rihanna (9) နဲ့ Katy Perry (8) ပြီးနောက် တတိယမြောက်နေရာတွင် Bruno Mars ကရပ်တည်နေသည်။
ကယ်လ်ဗင် ဟဲရစ် Harris က " ဒုတိယအယ်လ်ဘမ်သည် Weekend အတှကျအဆငျသငျ့, နောက်ဆုံးမှာလွတ်မြောက်လာ၏နှစ်လအတွင်း BPI တို့ကရွှေကိုအသိအမှတ်ပြုခံရခြင်း, ဩဂုတ်လ 2009 ခုနှစ်ကဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ဗြိတိန်အယ်လ်ဘန်ဇယားအပေါ်အရေအတွက်ကတဦးတည်းမှာပွဲထွက်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ အယ်လ်ဘမ်တွင်ထည့်သွင်းသည့်တိုင်အောင်တဆယ်လေးပုဒ်၏က Eleven တစ်ခုတည်းကိုသာ Harris ကအသုံးပြုပုံသီဆိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့ကြသည်။ "ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းမရယ်" အယ်လ်ဘမ်ရဲ့ဦးဆောင်တစ်ခုတည်း 2009 ခုနှစ်ဧပြီလ၌ရှိသကဲ့သို့ဖြန့်ချိ, ဗြိတိန်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ဇယားအပေါ်အရေအတွက်ကတဦးတည်းမှာပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲတစ်ခုတည်းပါ "ဟုတနင်္ဂနွေအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား", နံပါတ်သုံးရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဂျော်ဒန်အဆိုတော် Ayah Marar featuring တနင်္ဂနွေအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားကနေတတိယတစ်ခုတည်း, "Flashback" ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်အရေအတွက်ကဆယ်ရှစ်ယောက်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ အယ်လ်ဘမ်၏ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း Harris က YouTube ကိုခေါင်းစဉ်က JAM တီဗီပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများတစ်စီးရီးတည်ခင်းဧည်, သောထိုကဲ့သို့သော Florence Welch, Goldie, Katy Perry အဖြစ်ဂီတသမားယို၏အိုးဖွင့်လှစ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ 2010 Brit Awards ဆုပေးပွဲမှာ Harris ကအကောင်းဆုံးဗြိတိန်အမျိုးသားတစ်ဦးအမည်စာရင်းတင်သွင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ကယ်လ်ဗင် ဟဲရစ် 8 ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 တွင်အယ်လ်ဘမ်မှစတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံးတစ်ခုတည်းအဖြစ်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ် "သင်ငါ့ကိုကိုင်ထားရန်အသုံးပြု" ။ ဒါဟာဗြိတိန်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ဇယားအပေါ်အရေအတွက်က 27 အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ သီချင်း Harris ကမှန်မှန်သည်သူ၏မှတ်တမ်းများအပေါ်သီဆိုခဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှတ်သားသူဧည့်သည်အဆိုတော်များသူ့အဘို့မအသံများကိုရှိခြင်းစဉ်ဂီတထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ရန်ရွေးချယ်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်, မကြာမီပတ်ရစ်သူ၏ "အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားအဆိုပါနင်္ဂနွေပိတ်ရက်များအတွက်ခရီးစဉ်" ပြီးနောက်, Harris ကသူဦးဆောင်အဆိုတော်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်တိုက်ရိုက်ရှိုးလုပ်နေတာရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့၌သူ၏တီးဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူနည်းလမ်းတွေနှံ့ပြား။ Billboard နှင့်အင်တာဗျူးတွင်ခုနှစ်, Harris က said: "ငါ [နှစ်ခုအယ်လ်ဘမ်အပေါ်] တိုင်း Avenue ကုန်င်ကြောင့်ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာတိုက်ရိုက်သီဆိုရပ်တန့်ဘာကြောင့်ဖြစ်သည့်, ငါ့ကိုကောင်းသောအသံအောင်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူစဉ်းစားမိတယ်ငါချင်ပါတယ်။ ပိုကောင်း-ရှာဖွေနေမယ့်သူတစ်ဦး, ပိုကောင်းတဲ့အဆိုတော်, သီချင်းများအတွက် frontperson ဖြစ် သာ. ကောင်း၏ dancer စဉ်းစားရန်။ " ထို့အပြင်သူသည်, Shakira ရဲ့ "သူမက Wolf က" ၏ရီမစ်စ်အပါအဝင်အများအပြားရီမစ်စ်, ဖြန့်ချိ (Kanye West featuring) Katy Perry ရဲ့ "Vegas မှာ Up ကိုနှိုး" မစ္စတာ Hudson ရဲ့ "ဆူပါနိုဗာ" နှင့် Mika ရဲ့ "ကျနော်တို့ကရွှေ Are" ။.
ကယ်လ်ဗင် ဟဲရစ် Harris releasedacollaboration with Young Thug, Ariana Grande, and Pharrell Williams titled "Heatstroke" on 31 March 2017. In May, he announced that his forthcoming fifth studio album, "Funk Wav Bounces Vol. 1", would be released on 30 June 2017. It is expected to feature other appearances from the likes of Travis Scott, Kehlani, Future, Katy Perry, Big Sean, John Legend, Khalid, Schoolboy Q, D.R.A.M., Nicki Minaj, Lil Yachty, Jessie Reyez, PARTYNEXTDOOR and Snoop Dogg.